डा. केसीको माग, अनसन र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन-NepalKanoon.com
डा. केसीको माग, अनसन र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन
काठमाडौं: काठमाडौंमा आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित डा. गोविन्द केसी अनसनका लागि जुम्ला पुगे । अनसनको केहि दिनपछि उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले काठमाण्डौ ल्यायो । पछिल्ला दिनको डा. केसीको समर्थनमा नेपालस् कांग्रेस निकट तरुण दल, विवेकशील साझा , पुर्व प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्की, नागरीक अगुवाहरु र मानवअधिकारवादी हरुसमेत उनको समर्थनमा उत्रिएका छन । राज्यको मुख्य निकाय त्यसमा पनि न्यायलयको पुर्व प्रमुख शुशलिा कार्कीले डा केसीका माग पुरा नगरे देशैभर आगो बाल्ने चेतावनीपुर्ण अभिव्यक्ति आँउयनुले पुसर्व उच्च पदस्थहरुकै यस्ता आवाज आँउनु दुभाग्यपुर्ण रहेको बताँउछन ।
पछिल्ला आन्दालेन मा राजनिति छिरेको भन्दै कतिपयले डा। केसीको आन्दालेलन राजनितिक दिशातर्फ मोडिएको बताउयन थालेका छन । प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन हुवहु कार्यान्वयन गर्न केसीको माग रहेको छ ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको पुर्ण पाठ